Tamin'ny 1998 i Razaiarimanga Marie Meltine no nividy ny zaridainan'i Antaninarenina sy ny CEG Analamahitsy - Viva TV 1er Mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil BIANCO Tamin’ny 1998 i Razaiarimanga Marie Meltine no nividy ny zaridainan’i Antaninarenina sy...
Tamin’ny 1998 i Razaiarimanga Marie Meltine no nividy ny zaridainan’i Antaninarenina sy ny CEG Analamahitsy – Viva TV 1er Mars 2019
Eto Antananarivo renivohitra kosa dia anarana iray no miverimberina amin’ireo raharahan-tany izay nahavoasaringotra ny Kaominina Antananarivo izay nahabe resaka tao ho ato. Anarana izay mbola tsy re mihitsy teo amin’ny tontolon’ny haino aman-jery. Ary saika tsy misy mahafantatra mihitsy aza. Maro ny fanontaniana mipetraka manodidina io olona io, ary ny andinindinin’izay no entiny Sylvain amintsika ato anatin’ity fanadihadihana ity.
Ramatoa RAZAIARIMANGA Marie Meltine no nividy ny zaridainan’Antaninarenina. Ary mbola izy ihany koa no nahazo ny CEG Analamahitsy amin’ny ampahan’ny tanin’Atsonjombe. Iza i Ramatoa RAZAIARIMANGA Marie Meltine? Renim-pianakaviana teraka tamin’ny 1953; izany hoe tokony hoe 66 taona i Ramatoa RAZAIARIMANGA Marie Meltine amin’izao fotoana izao. Tsy misy fampahafantarana ankoatr’izay na sary na ny fonenany na ny fokotany misy azy. Mbola olona tsy re ary tsy hita mihitsy hatramin’izay i RAZAIARIMANGA Marie Meltine. Ny fantatra ihany koa dia ny hoe olona mpanefoefo be ity Ramatoa ity. Isan’ireo olona tsy dia tia misehoseho ve izany i Ramatoa RAZAIARIMANGA Marie Meltine? Fanontaniana izay toy ny hoe: tena misy ve io olona io sa anarana noforonina namindrana ireo tany? Anarana fanaovana afera? Tsy fantatra tokoa ny ambadik’izay, ary raha tena misy io olona iray io, tamin’ny fomba ahoana no nahazoan’ny tanin’ny Malagasy? Indrindra tany izay misy ny toeram-pianaran’ny ankizy sy ny tanora sy ny tany mirakitra tantara eto amin’ny Firenena, vakoka Malagasy. Mbola fanontaniana ihany koa izay, fanontanina izay saika niraisan’ny mpanara-baovao rehetra tato anatin’ny volana vitsy, eny taona maromaro mihitsy aza. Ny taona 2017 sy 2018 no nanomboka nivoaka tamin’ny fahanginana ireo milaza ho tompon’ireny tany ireny, tsy hay aloha hoe taranaky RAZAIARIMANGA Marie Meltine ve ireo olona ireo sa olona namindrana ny tany taorin’ny nanoratana azy tamin’io olona io. Araka ny voarakitra tao anatin’ny taratasim-barotra ny volana Jona sy Jolay taona 1998 no voarakitra tao anatin’ny taratasy nanaovana ny afera. Ny kaominina Antananarivo no namaritra izany tamin’i RAZAIARIMANGA Marie Meltine. Tsy afaka mivarotra tany ny kaominina Antananarivo fa afaka kosa mampanofa. Anefa misy ireo tranga ireo izay azo lazaina fa manokana, ary ny filankevim-pitantanana no nanome ny tany. Andriamatoa Lalaina Berthnes no nanao Sonia ny fanomezana ny tany an’i Ramatoa RAZAIARIMANGA Marie Meltine, araka ity taratasy ity ihany. Efa niezaka nitady an’ Andriamatoa Lalaina Berthnes moa ny mpanao gazety mialohan’izao saingy tsy nahita azy. Tsy misy afa-tsy Andriamatoa Lalaina Berthnes nefa no afaka hamaly ireny fanontaniana be dia be ireny, fa ny tena hatahorana amin’izao ora sy fotoana izao dia ny hoe: ireo roa ireo ihany ve ny tany lasan-dRAZAIARIMANGA Marie Meltine? Ankoatr’izay, fa maninona ihany koa no amin’izao fitantanan’i Lalao Ravalomanana izao no mivoaka ireo milaza nahazo ny tany?
Article précédentCe n’est pas demain qu’on va éradiquer la corruption à Madagascar d’après RABENARIVO Sahondra, nouvelle Présidente de la CSI – TVM du 1er mars 2019
Article suivantRABENARIVO Sahondra no filoha vaovao any Comité pour la sauvegarde de l’intégrité – TVM du 1er mars 2019